असाध्यै बोल्ड नेपालकी भेटेरिनरी डाक्टर टिकटकमा भाइरल, को हुन् उनी ? (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > असाध्यै बोल्ड नेपालकी भेटेरिनरी डाक्टर टिकटकमा भाइरल, को हुन् उनी ? (भिडियो)
admin December 24, 2021 December 24, 2021 जीवनशैली 0
प्रियंका ढकाल अहिले पछिल्लो सर्वाधिक चर्चामा रहेको भिडियो प्लाटफर्म टिकटकमा एकदम नै भाइरल छिन् ।उनको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ ।
जीउडाललाई कलात्मक र बोल्ड ढंगले प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनका भिडियोहरु खुबै चर्चित र आकर्षक जीउडाललाई कलात्मक र बोल्ड ढंगले प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनका भिडियोहरु खुबै चर्चित छन् । उनले २५ घण्टामा ५२ वटा भिडियो पोष्ट गरेर रेकर्ड नै राखेकी छिन् ।अत्याधिक भिडियो पोष्ट गर्दा टिकटकको अल्गोरिदमले राम्रो काम गर्ने भएकाले उनले सर्वाधिक भिडियो पोष्ट गर्ने गरेको बताउछिन् ।
उनको अहिले 7.5 लाख फलोअर्स भइसकेको छ भने ६ मिलिउन लाईकस् भएको छ । उनी भेटेरिनरी डाक्टर हुन् । भेटेरिनरी डाक्टर बनेर पशुको सेवा गर्ने उदेश्य बोकेकी उनले यति धेरै भिडियो कसरी बनाउन सक्छिन् भने सबै अचम्मित बनेका छन्।
तर उनका भिडियोहरु गीतमा आकर्षक जीउडाल देखाएर लिप्सिङ् मिलाएका मात्र देखिन्छन् । खासै क्रियटिभ नभएपनि उनी नेपालको चर्चित टिकटकर्सको सूचीमा छिन् । उनले निकै बोल्ड रूपमा प्रस्तुती दिन्छिन् । जुन निकै भाइरल बनिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय त झन उनको चर्चा चुलियो छ । मोटी मोटी अाकर्षक जिउडालका कारण नै उनको भिडियोले चर्चा पाउने गरेको छ ।
@priyankadhakal39 😍 #fyp #fy ♬ original sound – NITUKUMARI984
@priyankadhakal39 Nasa nasa ragat ma chau tmi ❤️ #fyp #foryoupage #biratnagarmuser #foryou #fypシ #fy #nasanasaragatmaxautimi #trending #goviral ♬ डॉडाघरे साइँली – श्रीकृण्ण /लक्ष्मि मल्ल
५ महिनादेखि सडकमै : त्रिपालमुनि चिसोमा कठ्यांग्रिँदै बाढीपीडितहरू…
आफ्नै विद्यार्थीसंग रात विताउन शिक्षिकाले होटलमा कोठा बुक गर्दा…
कमाएर जिन्दगी सुखी बनाउँला भनेर दुबई गएका बिचरा शिब २ घण्टामा कामबाट निकालिए, सात महिनादेखि अलपत्र
के तपार्इ बेरोजगार हुनुहुन्छ? अब टेन्सन नलिनुस अब फर्म भरेर यसरी लिन पाइन्छ भत्ता!
सौता बेर्होन तयार छु तर घर फर्किदिनुस् भन्दै एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई गरिन् आग्रह, यस्तोसम्म गरेका रहेछन् श्रीमानले, रुदैं आईन् मिडियामा (भिडियो सहित)